एसएलएलमा एलोन मस्कले डोजेकोइनको बारेमा कुरा गर्छ, र डोज पतन हुन्छ (मे,, २०२१) - काजु
एसएलएलमा एलोन मस्कले डोजेकोइनको बारेमा कुरा गर्छ, र डोज पतन हुन्छ (मे,, २०२१)
घर » घर » एसएलएलमा एलोन मस्कले डोजेकोइनको बारेमा कुरा गर्छ, र डोज पतन हुन्छ (मे,, २०२१)
ट्याग: Dogecoin, Elon Musk
टेस्ला र स्पेसएक्सका सीईओ एलोन मस्क, हाम्रो टेक्नोलोजिकल युगका दुई सफल वास्तविकताहरू, प्रसिद्ध अमेरिकी कमेडी शो स्याडे नाइट लाइभको एपिसोडको सह-होस्ट (सह प्रस्तुतकर्ता) थिए। एपिसोड मे 8, साँझ am:5.30० इटालीको समयमा प्रसारित भयो।
एलोन कस्तूरी र आमा माये कस्तूरी
स्पष्ट छ, एक महान समर्थक को रूप मा, उसले हालैका दिनमा घोषणा गरेको छ कि उसले डोजेकोइनको बारेमा पनि कुरा गरेको थियो, सबैजनाको मनपर्ने cryptocurrency meme। र सबैले सोचे कि ... 🚀
यसको सट्टामा, चार्ट निर्दयी छ: डोगेसिनको मूल्य यसको मोनोलग समाप्त हुने बित्तिकै घट्न थाल्यो, एक राम्रो रातो क्यान्डेलोनासँग, एक घण्टामा ०..0,66 देखि $ ०.0,53 मा जान।
डोजेकोइन मूल्य, समय फ्रेम १ एच
कार्यक्रमको एक प्रख्यात खण्डको बेला, पौराणिक वीकएन्ड अपडेट ऐतिहासिक रूपमा नॉर्म म्याकडोनाल्ड जस्ता पौराणिक चरित्रहरूद्वारा आयोजना गरिएको थियो, कस्तूरीले आफूलाई शोको मायालु वित्तीय वैज्ञानिक, लोइड ओस्टरटागको रूपमा प्रस्तुत गर्‍यो, र डोजेकोइन भनेको के हो भनेर व्याख्या गर्न भनियो।
"धन्यवाद माइकल, मलाई द डोगफादर भन," कस्तूरीले माइकल चेलाई भने।
"(डोगेसिन) इन्टरनेट मेम-आधारित मजाकको रूपमा शुरू भयो, तर अब यो धेरै वास्तविक तरिकामा बन्द गरिएको छ," मस्कले बताइयो।
त्यसपछि कसले बारम्बार कस्तूरीलाई वास्तवमा के हो भनेर सोध्यो, आफ्नो खल्तीबाट एक डलरको बिल निकाल्दै र कस्तूरीको नाकमुनि लहराउँदै, क्रिप्टोकरन्सी वास्तविक छ कि भनेर सोध्यो।
"यो त्यो डलर जत्तिकै वास्तविक छ," कस्तूरीले भने।
कोलिन जोस्ट कार्यमा उफ्रिनुभयो, यहाँसम्म कि डोगेकोइन वास्तवमा के हो भनेर सोध्नुभयो।
"यो मुद्राको भविष्य हो, यो एक अस्थिर वित्तीय वाहन हो जसले विश्वलाई अधिकार गर्नेछ," कस्तूरीले भन्यो।
र जब उनले वर्णन गरे कि क्रिप्टो मुद्राहरू नगदका लागि आदानप्रदान गर्न सकिन्छ, चेले भने, "ओह, यो एक उपद्रव हो।" (यो रहर छ!)
"हो, यो हल्ला हो," कस्तुरीले हाँस्दै भन्यो "चन्द्रमातिर!" (चन्द्रमा! 🚀)
के तपाइँ भिडियो हेर्न चाहानुहुन्छ? यहाँ छ:
यहाँ एलोन कस्तूरीको एक क्लिप छ जसको व्याख्या DG सिक्का SNL मा छ ...। उनले भने कि यो हस्टल हो 😂 pic.twitter.com/iyXbKH0FPZ
- निफाउ (@ रसटिग्निफाउ)9सक्छ, 2021
भारत बिटकॉइनलाई सम्पत्ति वर्गको रूपमा वर्गीकृत गर्न सक्छ
भारतमा Binance: भारत सरकारले प्रतिबन्धको सट्टा क्रिप्टोकरन्सी नियमनमा विचार गर्नेछ